Holm echiche igbe | Holmbygden.se
Ị nwere ezi echiche – nnukwu na obere?
O nwere ike ịbụ ihe ị na-eche nwere ike na-eme ka a ọzọ na; Holm obodo ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ maara ihe. Naanị pụrụ ichetụ n'echiche ókè…
Ọnụ, anyị na-nanị ihe ndị ezi echiche. The echiche nyere ebe a nwere ike eg. eji dị ka ihe ndabere maka dị iche iche nzukọ na mmepe Holms – ma i nwere ike na-ekere òkè. Ọ nwekwara ike ịbụ ndị dị otú ahụ na HBU nwere ike idozi ma ọ bụ ibiaghachi na nri. Egbula kpọtụrụ anyị ihe ọ bụla, Ọ dịghị amaghị bụ kwa nzuzu!
Olee otú m na-eme ka m echiche?
Ihe kacha ụzọ bụ iji na anyị n'ụdị na nri. Wet ke igbe na-eziga, doro anya! Biko itinye ọ bụla faịlụ, akwụkwọ ma ọ bụ foto gị amaghị, ọ dịkwa mma.
Ọ dịkwa ike kpaliri anyị ma ọ bụrụ na ọ na-adaba mma: info@holmbygden.se.
Ị chọrọ ịnọgide na-amaghị aha?
Ọ bụ n'ezie na-achọsi ike ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-agwa anyị onye ị bụ, ma ọ pụkwara ịnọgide na-amaghị aha.
Vill du kanske bara vara kontaktbar för Holmbygden.se (#ShepherdsHut), ma amaghị eyi na gị aro dịkwa mma. Ọ bụrụ otú ahụ, dee ya n'okpuru ebe a “Personal Communication”. Send gị echiche site na website.
All aro na-nnọọ.
Mbụ na nke gị echiche:*
Description of echiche:*
Personal ozi webmaster:
Itinye faịlụ dị n'okpuru:
Oke file size: 25mb.
na 2 (iji n'ụdị ọtụtụ ugboro ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa):
17/12: Utah: Warning klas 1, snöfall, V... Över Medelpadskusten natt mot m&ari... GỤKWUO
Ett lättare snöfallsområde fortsätter ... GỤKWUO